သငျသညျအနညျးငယျမေတ္တာတော်ကိုလိုလျှင်သင်အနည်းငယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေးရန်ရှိသည်! – Spending the time to send your friends lives every time you log in (ဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့သတိပေးခံရ) သင့်ကိုယ်ပိုင်စာတိုက်ပုံးအထောက်အကူဖြစ်စေချစ်ခြင်းမေတ္တာချွေတာစိတ်ဖောက်ပြန်အတူစိမ်းဖြင့်ပါလိမ့်မည်သေချာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. အနည်းငယ် Give အနည်းငယ်ရ!
သငျသညျကိုပြောသည်နေကြသည်အရာရာလုပ်ပေးမနေပါနဲ့! – ယင်း၏ရုံမျှမကဤကိစ္စတွင်၎င်း၏ကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာ fun..but, သင်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် Saga ဂိမ်းကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာသင်မကြာခဏဘဝတွေကိုပေးပို့ဖို့အချက်ပြမျက်နှာပြင်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်နေကြတယ်, မိတ်ဆွေများရွေ့လျားသို့မဟုတ်ဖိတ်ကြားချက်များ…ဖိတ်ခေါ်မှုကိုမပို့, တစ်စုံတစ်ဦးကများကကစားမပါအလေးအနက်ထားလျှင်ယခုသူတို့ဖြစ်ချင်တယ် dont, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကျောက်အောက်မှာအသက်ရှင်နေထိုင်ဖြစ်စေကြောင်း. ပြီးသားကစားကြသူမိတ်ဆွေများဘဝတွေကိုနှင့်ရွေ့လျား Send, ဒါပေမယ့်ဖိတ်ကြားချက်များထွက်ပေးပို့ခြင်းမင်းကြီးသည်များအတွက်ဖွင့်ကြော်ငြာနှင့်လူတွေအများကြီးအလုပ်မှာအနှောက်အယှက်, သူတို့များသောအားဖြင့်လည်းအီးမေးလ်တစ်စောင်အဖြစ်တိုင်းအကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိအဖြစ်လည်းနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သောအထူးသဖြင့်သူတို့အား.
သင့်ရဲ့ရွေ့လျားကိုသုံးပါ! – သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များပြီးစီးသည့်အခါ Candy Crush နှင့် Papa သစ်တော် Saga မတူဘဲပေကယ်ဆယ်ရေး Saga အတွက်မဆိုကျော် left ရွေ့လျားတဲ့အချက်တွေကိုဆုကြေးငွေသို့လှည့်ရမရ, သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြသည်ကိုတစ်ကြိမ်နှင့်သင့်အချက်များရည်မှန်းချက်ကြောင်းကစားများအတွက် end..thankyou င်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, ယခုလက်ျာဘက်တစ်လျှောက်ရွှေ့! so if you really want to earn those three stars I suggest you work your last pet to the bottom and sit it on top ofafail proof group of blocks that you can clear with your very last move or if you haveafirecracker to use you can always go with that.
သင့်ရဲ့လုပ်ကွက်ချွတ် Knock! – Metal boxes are pains in the neck! ထိုသို့အလေးအနက်ထားရွှင်လန်း! ရန်ဘုတ်အဖွဲ့မှသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်သာနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်; သူတို့ကိုတက်မှုတ်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုပယ်ခေါက်. သငျသညျတစ်ကြိမ်လေးသေတ္တာများအထိရှင်းလင်းသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်နှိမ့်ချလှုံ့ဆျောတစ်ချိန်ကချွတ်တင်ရန်ခံရဖို့တစ်ကော်လံထိပ်မှာသူတို့ကိုစွန့်ခွာဖို့ကြိုးစားနိုင်မယ့်ဗုံးအသုံးပြုခြင်း. သာသင်ကသေတ္တာပေါ်မှာချစ်စရာနှင့် fluffy ဆောက်ထားတဲ့ကြရှာတွေ့မှအောက်ဆုံးမှသင့်ရဲ့လမ်းအပြင်းအထန်ထက်ပို frustrating ဘာမှမရှိဘူး!
အထွေထွေပေကယ်ဆယ်ရေးအရိပ်အမြွက်နှင့်အစွန်အဖျား, 7.5 out of 10 based on2ratings